Tun Tun's Photo Diary: Window shopping at Marina Bay Sand
ညတိုင်း Marina Bay Sand အပြင်ဘက်မှာေ၇ပန်း ပြပွဲ ရှိပါတယ်။ ပွဲချိန်က ၈နာ၇ီလောက် ထင်တာပဲ။ ခဏခဏ ကြည့်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတခါပဲ ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်မိတာပါ။ Laser မီးတွေ နဲ.ေ၇ပန်း ပေါ်မှာ ပုံဖော်တာပါ။ တီးလုံး သီချင်းတွေလဲ အကျယ်ကြီးဖွင့်ပါတယ်။
ေ၇ပန်းကြည့်တဲ့ နားမှာပဲ ဟောဒီ အ၀ိုင်းပုံစံ အခွက်ကြီးရှိပါတယ်။ အ၀ိုင်းကြီးရဲ. တဖတ်ကနေ စကားပြော၇င် ဟိုဘက် ကနေ ကြား၇တယ် လို.ပြောကြတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ မစမ်းကြည့်၇သေးဘူး။ အဲ့ဒီ အ၀ိုင်းထဲကို လူတွေက အကြွေစိတွေ ပစ်ထည့် ကျတယ်။ ပြီး၇င်ေ၇တွေ ထွက်လာပြီး အဲဒီ့အကြွေစိတွေ ကို ဆေးချ ပစ်လိုက်တယ်။ေ၇တွေကို အောက်ထပ် ထဲ ကို ဖောက်ချလိုက်တယ်။ေ၇တွေ အကြွေစိတွေ အောက် ထပ်ေ၇ာက်သွားတယ်။ အောက်က ပုံက အောက်ထပ်ကနေ ၇ိုက်ထားတာပါ။
Marina Bay Sand ကိုသွားတိုင်း Window shopping ပဲ သွားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်တွေ က အကောင်းစား Branded ပစ္စည်းတွေ ပဲ မို. ကိုယ်ဝယ်နိုင်တဲ့ ဆိုင်မျိုးတွေ မ၇ှိသလောက်ပါပဲ။ Food court ကလဲ တော်တော်လေး ဈေးကြီးပါတယ်။ အပြင်က ဈေးနဲ. အနည်းဆုံး ၂ဆလောက် ဈေးပိုတယ်။ အိမ်ကလာလည်တဲ့ တွေက Tourist ဆိုတော့ Marina Bay Sand မှာရှိတဲ့ Casino ကို ပတ်စပို. ပြပြီး Free ၀င်ကြည့်လို.ရပါတယ်။ S pass / EP သမားတွေလဲ ကဒ်ပြပြီး Casino ထဲကို Free ၀င်လို.ရပါတယ်။ ကျွန်တော် က PR ဆိုတော့ ၀င်ကြေး ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေး၇မှာမို. အိမ်ကသူတွေ ပဲ ၀င်ခိုင်း ပြီး အပြင်မှာ စောင့်နေတယ်။
အပြင်မှာ စောင့်နေတုန်း Mall ထဲမှာ ၇ှိတဲ့ ဆိုင်လှလှလေးတွေ ကို ဓါတ်ပုံ လိုက်၇ိုက်ခဲ့တယ်။ Mall ကြီးက အကြီးကြီး ပဲ လေဆိပ်နဲ.တောင် တူနေတယ်။ ဆိုင်တွေ ပြင်ဆင်ထားတာ အ၇မ်းလှပါတယ်။ ၀င်ကြည့်ချင်စိတ် မရှိလှအောင် (မ၀ယ်နိုင်လို. :P) စပါယ်၇ှယ် ပြင်ဆင်ထားတာပါ။
Casino အထွက်နားမှာ Luxury items လက်ဝတ်ရတနာ။ လက်ပတ်နာ၇ီ ဆိုင်တွေ ရှိပါတယ်။ ကြည့်ရတာ Casino မှာဆော့လို. နိုင်လာ၇င် ၀ယ်လို.၇အောင် လုပ်ထားတာလားမသိဘူး။ ဆိုင်တွေက ပိတ်သွားပြီမို. အေးအေး ဆေးဆေး အပြင်က နေ ဓါတ်ပုံ လှမ်း၇ိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ၀န်ထမ်းတွေ ၇ှိ၇င်တော့ ဓါတ်ပုံပေး၇ိုက်မယ် မထင်ဘူး။
ကပ်ထားတဲ့ ဈေးနူန်းလဲ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒေါ်လာ ၁သိန်းကျော်။ ၁၀နှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ပြီးစုတောင် ၀ယ်နိုင်ပါ့မလား။း) ၀ယ်တဲ့သူတွေ လဲ ရှိလို. ဆိုင်ဖွင့်ထားတာနေမှာပေါ့။
at 4/24/2014 06:18:00 AM